December မှာစပြီး စန်းပွင့်လိုသူများအတွက်.. ~ ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ
December မှာစပြီး စန်းပွင့်လိုသူများအတွက်..
11/26/2012 02:42:00 PM Shwemantarlay Wai Yan No comments
ကဲ... မရေးဖြစ်တာကြာလို့ ရေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ...
ရေးမယ့်ရေးတော့လည်း သူများကို အဆင်ပြေစေချင်တာ ရေးချင်လို့ ဆရာစံဇာဏီဘို ပြောတဲ့ဟာလေး ရေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ. အဲဒါကတော့ လာမည့် December မှစပြီး စန်းပွင့်လိုသူများအတွက်ပါ. အောက်ပါနည်းအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးတွေတောင် အောင်မြင်တယ်ဆိုဘဲ...
ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ဟာ အင်္ဂလိပ်ရက်တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ Sweet December ဖြစ်တယ်. ဒါကြောင့် အဲဒီနေ့မနက်စောစောမှာ ပွင့်နေတဲ့ ပန်းကလေးများကို ခူးယူပြီးတော့ မိမိအနီးနားမှာရှိတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် ဖန်အိုးလေးထဲ ထိုးစိုက်ထားလိုက်ပါ။ ၃ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ကျရင် အဲဒီပန်းတွေထဲကမှ မညှိုးနွမ်းဘဲကျန်ခဲ့တဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုယူပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာညပ်၊ ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ယူသွားပါ။မေတ္တာဓါတ်တွေပွင့်လန်းလို့ ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ဗျာ..
အားလုံးလည်း အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်.... အရာရာကိုပေါ့ဗျာ..
၂၆.၁၁.၂၀၁၂ နေ့လည် ၂း၄၂မိနစ်
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘ...
Mobile Guide journal Issue#79
Mobile Guide journal Issue #78
Mobile Guide Issue#77
Mobile Guide Journal Issue#76
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် Mobile Guide Journal Issue 80